दुई महिनाभित्र भभाट्रोन कोबाल्ट जडान – indepth.com.np
दुई महिनाभित्र भभाट्रोन कोबाल्ट जडान
२५ श्रावण २०७५, शुक्रबार १८:२६
भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल पुगेको भारतीय सरकारी टोलीलाई स्वागत गरिँदै ।
भारतीय सरकारी टोली भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालमा
भक्तपुर । भारतीय सरकारको चार सदस्यीय टोली शुक्रबार भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल पुगेको छ । बोर्ड अफ रेडियसन एण्ड आइसोटप टेक्नोलोजी (बीआरआईटी) का प्रमुख कार्यकारी गणेश गोपाल कृष्णनमको नेतृत्वमा आएको चार सदस्यीय टोली अस्पताल पुगेको हो ।
गएको वैशाख २८ र २९ गते दुईदिने नेपाल भ्रमणका क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भक्तपुर क्यान्सर अस्पताललाई भभाट्रोन सेकेन्ड कोबाल्ट मेसिन उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका थिए । सोही घोषणाअनुसारको कोबाल्ट मेसिन जडान गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन गर्न उक्त टोली अस्पताल पुगेको अस्पतालका मेडिकल निर्देशक प्रो.डा. ऋषिकेशनारायण श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार टोलीले अबको दुई महिनाभित्र कोबाल्ट मेसिन जडान गर्न सकिने बताएको छ ।
अस्पतालमा रेडियोथेरापीको लागि बिरामीहरुको लामो प्रतीक्षा सूची रहेकाले छिटोभन्दा छिटो कोबाल्ट मेसिन जडान गर्न आफूहरु तयार रहेको भारतीय टोलीका प्रमुख गणेश गोपालले जानकारी दिए ।
उनले अस्पतालले नेपालको क्यान्सर क्षेत्रमा गर्दै आएको सेवाबाट आफूहरु प्रभावित भएको सुनाए ।
‘अस्पतालमा रेडियोथेरापीको लागि कुर्ने क्यान्सर बिरामीको प्रतीक्षा सूची लामो रहेछ’, गणेश गोपालले भने, ‘उक्त प्रतिक्षा सूचीमा रहेका बिरामीहरुलाई रेडियोथेरापी सेवा दिन छिटोभन्दा छिटो मेसिन जडान गर्छाैं ।’
अस्पतालका मेडिकल निर्देशक प्रो.डा. श्रेष्ठले मेसिन अस्पताल आइपुगेको दुई महिनामा जडान गरी सेवा प्रवाह गर्ने योजना रहेको जानकारी दिए ।
हाल अस्पतालमा रहेको पुरानो कोबाल्ट मेसिन रहेकै ठाउँमा भारत सरकारले उपलब्ध गराउने नयाँ मेसिन जडान गर्ने उनको भनाइ थियो ।
‘मेसिन अस्पताल आइपुगेको दुई महिनाभित्र जडान गरी सेवा प्रवाह गर्ने हाम्रो योजना छ’, प्रो.डा. श्रेष्ठले भने, ‘उक्त मेसिन जडानपछि बढीभन्दा बढी क्यान्सर बिरामीले सेवा गुणस्तरीय रेडियोथेरापी सेवा पाउनेछन् ।’
उनका अनुसार भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालमा अहिले दैनिक करिब ९० जना क्यान्सर बिरामीले कोबाल्ट मेसिनबाट रेडियोथेरापी लिँदै आएका छन् । त्यस्तै एकसय २७ जना क्यान्सर बिरामी रेडियोथेरापीको लागि प्रतीक्षा सूचीमा रहेका छन् ।
अस्पतालको रेडियसन अन्कोलोजी विभागमा पाँचजना विशेषज्ञ चिकित्सक, तीन जना मेडिकल फिजिसिस्ट, सातजना थेरापी रेडियोग्राफर र एकजना बायोमेडिकल इञ्जिनियर कार्यरत छन् ।
गणेश गोपाल नेतृत्वको टोलीलाई अस्पताल सञ्चालन गर्दै आएको नेपाल अर्बुदरोग निवारण संस्थाका केन्द्रीय उपाध्यक्ष महेश श्रेष्ठ र महासचिव विमलकुमार होडालगायतले स्वागत गरेका थिए ।
त्यस्तै अस्पतालका मेडिकल निर्देशक प्रो.डा. श्रेष्ठले अस्पताल र रेडियसन अन्कोलोजी विभागकी प्रमुख प्रो.डा. आरती शाहले आफ्नो विभागको बारेमा प्रस्तुतीकरण गरेका थिए ।
भारतीय टोलीमा गणेश गोपालसँगै भारतस्थित अटोमिक इनर्जी रेगुलारिटी बोर्डकी साइटिफिक अफिसर सृष्टि शर्मा, पानासियो मेडिकल टेक्नोलोजिस्ट जी. सुव्रमण्यम र मेडिकल फिजिसिस्ट योगेश गोविन्द घादीसँगै नेपालस्थित भारतीय दूतावासका असिस्टेन्ट मिलिटारी अटाची दीपंकर राजारामको पनि उपस्थिति थियो ।
पाँच वर्षमा ४८२ जनाको मृगौला प्रत्यारोपण
क्यान्सर सर्भाइभरहरुको दोस्रो भेला सम्पन्न (फोटो फिचरसहित)